De Haan, Vlaanderen, i-Belgium
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Jean-Paul From BnbSupport
U-Jean-Paul From BnbSupport unokuphawula okungu-163 kwezinye izindawo.
Siyakwamukela e-Villa Manouchka! Indlu ethokomele nejwayelekile enhliziyweni eluhlaza ka-De Haan. Itholakala endaweni enokuthula emizuzwini emi-5 kuphela ukusuka ogwini lolwandle.
Jabulela indlu enethezekile nevulekile nomndeni wonke onamagumbi awo okulala ama-4! Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzokwazi ukujabulela isilungiselelo esivumelanayo lapho sihlanganisa khona okuhle kwakho kokubili. Ikhishi likuhlomele ngokuphelele ukulungiselela ukudla okuhle ongakujabulela etafuleni lokudlela. Ufuna ubusuku obumnandi? Vele ubuyele emuva engadini noma uhlangane kusofa ngenkathi udlala umdlalo webhodi futhi uphuza iwayini. Ingadi ilungele kusihlwa sasehlobo. Izinketho azinamkhawulo!
*** OKUMQOKA ***
Ekhishini sinikeza izinkomishi zekhofi ze-Nespresso, ubisi noshukela, amafutha omnqumo, upelepele nosawoti, ukugeza izandla, okokuhlanza, ithawula lasekhishini, indwangu yasekhishini nesipontshi sasekhishini, amaphilisi okugeza izitsha, iphepha lasekhishini nomgqomo kadoti onezikhwama. , njll... Konke okudingayo ukuze uqale ukuhlala kwakho ngokunethezeka.
Indlu yonke ihlanzwa ngobuchwepheshe, kunelineni elihlanzekile neli-ayinwa lombhede linikezwa futhi libekwe phezu kwemibhede, amathawula okugeza ekhwalithi ephezulu kumuntu ngamunye futhi zonke izinto ezibalulekile zokuhlanzeka kwakho kanye nekhishi linikezwa futhi ligcwaliswe.
Uma uneminye imibuzo noma izicelo, sicela usazise. Sithanda ukusiza nokuphendula noma yimuphi umbuzo ongase ube nawo.
Sithemba ukukwamukela futhi sikubheke ngabomvu ukuhlala kwakho!
I-De Haan iyidolobhana langempela elihle lapho ungajabulela khona ulwandle namasiko alo amangalisayo! Indlu isendaweni ethule.
Ibungazwe ngu-Jean-Paul From BnbSupport